Inkqubo yokunakekelwa kwesikhumba esinamafutha kunye kunye kunye. Ukwandiswa kwemfihlo yeengqungquthela eziqhekezayo, isikhumba esikhonyayo, i-pores eyandisiweyo, i-rashes-ngoko-ke i-epidermis inqaba ukunyanzelisa kwaye inkqubo yokunyamekela ngokufanelekileyo iya kunceda ukuhlangabezana nale nto. Inkqubo yokulinganisa Ama-mavalia aya kugcina izinga lokunyanzela kwesikhumba sotyathisiweyo okanye uhlobo oludibeneyo kwaye abuyisele ukuthobeka, ukunyaniseka kunye nobuhle. Ziziphi iindlela ezingcono ekusebenziseni ukunakekelwa kwesikhumba esinamafutha kunye nento engafanele isetyenziswe?
I-Lotion (okanye i-gel) ukususa i-makeup evela kwamehlo + ukucoceka ubisi bokuhlambulula (okanye i-foam) kuzo zonke iintlobo zesikhumba. Kwiibophe ezisezantsi, faka uboya bekoton ehlanjululwe ekucoceni i-lotion, kunye ne-cotton buds kunye ne-gel ukususa ukwakheka kwamehlo, ukususa ngokucophelela i-mascara kwi-eyelashes. Hlanza ubuso bakho, uhamba kwimigca ehamba phambili yokusila, i-disc ehambile ngobisi ii-Mavalia. Faka isicelo kwisicatshulwa esisezantsi. Unomfanekiso wobuncwane, ususe ngokukhawuleza uyenzayo, ususe utywala kunye namafutha amaninzi ngelixa ugcina umlinganiselo wobumanzi. Awuyikucaphukisa isikhumba, kodwa uyayiphakamisa.
Ukunciphisa ukunyaniseka. Musa ukusihlamba, sisebenzise loo mveliso kwilusu ecocekileyo ngepotton pad. Ukuze ususe okungaphezulu, thintela ubuso ngendwangu elithambileyo. I-Lotion iyimfuneko eyongezelelweyo kunye neyokugqibela yokucoca. Unempahla yokubuyisela kwaye iphucula umphumo wezinye iimveliso zonyango. Ukuhlaziywa kunye neetoni.
Isigaba: Ucoceko olujulile
Ukhenkcoza okulula. Kwikhumba elicacileyo ebusweni, faka i-exfoliant, ugweme indawo ejikeleze amehlo. Ukucoca ngokunyamezela imizuzu emi-2-3, uze uhlambulule ngamanzi acocekileyo. Ukukhenkcezwa kancinci i-Mavalia kunceda ngokukhawuleza ukususa iiseli ezifileyo kunye nokungcola okuqokelela kwiindawo eziphathekayo, kwaye kukhanyisa iindawo ezinemibala. Izinto ezinobungozi zemvelo zivuselela ukuvuselelwa kweeselm, i-lemon icons tones kwaye ilawula ukugcinwa kwemigqomo egciniweyo. Kubandakanywa ukubunjwa kwee-green and oil grape oil okhusela ukuguga. Ukubunjwa kwazo zonke iindlela zomgca we-Mavalia kubandakanya ukukhishwa kweentyantyambo kunye namagqabantshintshi okukhula e-Alps. Inokuphucula, ithambisa kwaye ihlaziye indawo.
Isigaba: Unonophelo oluthile
Umaski kunye nesenzo sokulinganisa. Faka isicelo esincinci esincinci ebusweni bakho kwaye ulinde kude kube mncinane. Yilungiselele inxalenye yemveliso ukuba ibandakanywe. Umaski kunye nomphumo wokulinganisa - ukunyamekela ngokukhethekileyo kwesikhumba esinamafutha kunye nentlangano, ejongene neemeko zemozulu kunye noshintsho lwe-hormonal. Umxube omncinci wesikhombane unobuncwane obunqamle i-fat fat, unike i-epidermis umthunzi womzimba ofanayo. Isilwanyana silawula ukukhutshwa kweengqungqa zesikhumba, kuvuselela, kubuyisele kwakhona izicubu ezonakalisiweyo kwaye zikhusela.
Yenzelwe phezu kwemaski ngokukhawuleza xa ityala kancane. Kule nkqubo, khetha i-massage usebenzisa indlela ye-Jacques pinch. Iphucula ithoni yesikhumba, eyenza ithambeke kwaye ifuthe.
A) Ngokuhamba ngokulandelelana ngokukhawuleza, gcoba isikhumba sakho, ukusibamba phakathi kwesithupha sakho kunye nesandulela.
B) Phakamisa kwaye uqine isikhumba kancane. Ngexesha le-tingle, ukunyakaza kufuneka kube ukujikeleza kunye nokwaneleyo.
B) Hambisa izandla zakho ukusuka kwiziko ukuya kwipheriphery, uqala entanyeni uze unyuka ebunzini.
D) Qedela ukusilalisa ngokubetha.
Inkqubo yokulinganisa i-Mavalia ilungele isikhumba samanzi: igcina umgangatho wobumanzi kuyo kwaye ibuyise ukuqina kunye nokuthoba kwi-epidermis. Ulusu luba luhle kwaye lube luhlaza, luguqulwe. Ixesha elipheleleyo: imizuzu engama-40 kusasa okanye ngokuhlwa, ukuphindaphindiweyo: kanye ngeveki.
Gel kwesikhumba ejikeleze amehlo I-Eye-Fit kuzo zonke iintlobo zesikhumba + ukhilimu wokuqhathanisa. Faka i-gel kwesikhumba ejikeleze amehlo kunye nomtya omkhulu. I-Matirujushchy ivuselela ukhilimu we-day ngeendlela ezifanelekileyo zesikhumba kunye kunye kunye nokuvimbela ukwabiwa ngokweqile kwamafutha ase-dermal. Igcina inqanaba eliyimfuneko lokunyuka, i-matiruet, idibanisa, ihlaziye. I-krimu ihle kwaye isiseko sokwenza. Nangona kunjalo, ukulungelelanisa okwenziwe emini, qaphela - isixhobo sinokuqhawula!
Ngoluhlobo lwesikhumba lwam oludibeneyo, kunzima ukwenza ngaphandle kokwenziwa kwansuku zonke. Ummandla we-T ukhanyisa, kwaye i-cheekbones nezihlathi zibonakala zimile. Kubalulekile ukukhetha izimonyo zokuzicoca, eziza kuzifihla impazamo. I-tone ye-Matirujushchy kunye ne-powder yiyo ngaphandle kokuba ndingayishiyi indlu. Ngenxa yoko, isangqa sivala. Ukuzama ukuguqula konke ukungapheleli kwimini ngokuncedisa iimveliso zokuzongcola, ndandisa nje ingxaki, kwaye ngokuhlwa kusiba khona izibonda esikhumbeni. Okumangalisa kukuba, inkqubo yokulinganisa ibenze ubuso bam ngohlobo lokuqala. Ukufunyanwa kwam kukuba yinto yokuba emva koko unokuhamba ngokukhuselekileyo "ekufeni" ngaphandle kokwenza konke! Ulusu lwam lube luhle kwaye lukhonze imizuzu engama-40, kwaye ubude bufumene umthunzi omtsha ohambelana. Yaye ukuba wenza le nkqubo nganye ngeveki, njengoko kucetyiswa yi-beauty beautician, ngoko unakho ukulibala "ngokuhlobisa" umntu, kwaye wenze kuphela kwiziganeko ezizodwa. Emva koko, ulusu lubukeka luphelele! "
Yintoni i-botox kunye ne-dysport: iimbali kunye nenyaniso
Ukuzivocavoca ukufanisa izihlunu zobuso
Indlela yokucoca kakuhle i-grenade
Ikhekhe le-lemon elinemibala
UDaria Pynzar wayenentloni nge-swimsuit yakhe efanelekileyo, ifoto
Ziziphi i powders?
Ikhekhe le-cranberry ikhekhe
Iibheke zeThokoleta ngee-alimondi
Dorado kwi Grill